Desktop Linux wuu dhintay, qeybta 2. | Laga soo bilaabo Linux
Ma sahlana in maqaal laga qoro Miguel de Icaza iyo ereyadiisa, ee aan dareenku ka soo bixin. Waxa aan sameyn karo waa inaan ku tuso wixii dhowaan ku dhacay google + chat.
Primero Sriram Ramkrishna Wuxuu ku dhajinayaa boggiisa xiriiriyaha qoraalka Miguel de Icaza ee ku saabsan "Geerida miiska". Kahor intaadan xusin waxa soo socda, waxaa jira tuduc tilmaamaya Muktware:
“Linux, in kasta oo uu yahay nin heer hoose ah, haddana wuxuu dejiyay codka bulshada sanado ka hor markii ay diiday taageerada binary ee darawalada qalabka. Dadka kernel-ka ah waxay lahaan doonaan sababo macquul ah taas, waxayna ku qasbi doonaan warshadaha inay ku ciyaaraan xeerarkooda, laakiin dadka desktop-ku ma aysan lahayn awood ay leeyihiin ehelka kernel. Laakiin waan ilaalinay dabeecada.
Jawaabta ugu horeysa ee qoraalkii Sriram wuxuu ka yimid Alan cox:
Qaybta labaad ee dhibaatada ayaa ah in aanu jirin laba qaybood oo Linux loo qaybiyey oo ku heshiiyey qaybaha aasaasiga ah ee la isticmaalayo
Taasi way iga qoslisay. Waxaa jiray mar KDE iyo Miguel ka dib ayaa yimid oo abuuray jahwareerka uu ku hadaaqayo. Waxay sidoo kale ahayd qodob muhiim ah oo ku qasbaya dadka inay liqaan CORBA oo markaa markaa ahayd in si tartiib tartiib ah looga saaro masiibadii ka dhalatay ee burburisay Gnome 2.x isla markaana qaadatay waqtiyo horumarineed oo aad u weyn.
Wuu ku saxanyahay in Gnome uu ku jabo iswaafajinta ma aha oo kaliya codsiyada laakiin wuxuu la socdaa UI, qaabeynta (taas oo wali ka sii xun tan Gnome 1.x!), Iyo wixii la mid ah.
Si kastaba ha noqotee, maahan cudur laga helo Ilaha Furan laakiin waa mashruucyo gaar ah sida cudurka Gnome - kernelkeyga 3.6rc weli wuxuu ku socdaa binary Rogue oo la soo ururiyey 1992. X wuxuu la jaan qaadayaa codsiyada ka weyn Linux.
Xanaaqiisa maqalka waxaan ku eedeynayaa Lennart Poettering (abuuraha PulseAudio) 8) - codka kernel ma jabin iswaafajinta, xitaa wuxuu leeyahay lakabyada iswaafajinta OSS ee mabaadi'da taageerada codka ee Linux. Xaqiiqdii eedeynta Pulseaudio sidoo kale waa wax xun (laakiin waa wax lagu farxo in Lennart lagu eedeeyo taasna waa waxa jira) - waxay leedahay waxyaabo iswaafaqsan oo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan barnaamijyadii hore 8)
Gnome si kastaba maahan desktop - waa mashruuc cilmi baaris ah.
Jawaabta labaad waxay ka imaaneysaa Linus Torvalds:
Dadka Gnome ayaa leh yo Waxaan calaamadeeyay "dabeecadda" dhibaatooyinka sababay waa wax lagu qoslo.
Mid ka mid ah shuruucda muhiimka ah ayaa marwalba sidaas ahaa marna waa inaad jebisaa is-dhexgalka dibadda. Sharcigaas ayaa jiray maalinti koowaad, inkasta oo ay si cad u muuqatay oo keliya sannadihii u dambeeyay. Xaqiiqda ah inaan jabinno is-dhexgalka gudaha ah oo aan u muuqan isticmaaluhu waa mid aan khusaynin, xarig cas.
Rajo in dadka gnome-ka ay fahmeen sharciyada dhabta ah ee ku jira gudaha xarkaha. Sida "waligaa ha jebin is-dhexgalka dibadda" - iyo "waxaan u baahanahay inaan sameyno si aan wax u wanaajino" maahan cudurdaar.
Ama "isticmaaleyaasha kaladuwan waxay leeyihiin baahiyo kala duwan." Kernel wuxuu ahaa - waana ku faraxsan yahay inuu ku taageero labada mashiin kumanaan kumbuyuutaro SGI ah iyo iibiyeyaal ay kuxiran yihiin taleefannada gacanta iyo router. Xaqiiqda ah inay baahiyo kala duwan qabaan ayaa ah aad u cad.
Shakhsiyan waxaan u maleynayaa hal sabab oo kernel-ka Linux uu sidaa ugu guuleystay waa xaqiiqda oo aanan aragti weyn ka laheyn meesha aan doonayay inaan dadka ku qasbo inay aadaan. Xaqiiqdii, waxaan doonayay "unix", waxaana jira dhowr fikrado heer sare ah oo la socda taas (fargeeto, ful, feylal iwm), laakiin ma aanan dooneynin inaan xoog ku saaro aragti gaar ah oo ka baxsan qaabkaas guud.
Xaqiiqdii, Linux waxay qabatay wixii aan ku talo-galay 1991 markii ugu horreysay ee aan sii daayo. Dhammaan horumarka xigay waxaa keenay fikradaha dibedda ee waxa dadka kale u baahan yihiin ama doonayaan inay sameeyaan. Maaha sababta oo ah aragtida gudaha ee ah meesha ay tahay in ay "tagto".
Taasi waa tan ka soo horjeedka maskaxda "sida ugu fiican ee aan u naqaano", iyo "Waxaan kaa yeeli doonnaa inaad liqdo Corba / .NET xoog ama ha jeclaan ama ha jeclaan, haddii aad cabanaysidna, waxaad ka hor imaanaysaa horumarka, waadna awooddaa ha ku badalin "by gnome.
Qaar ka mid ah gnome waxay umuuqdaan inay gebi ahaanba diidayaan waxa dhibaatadooda ah. Waxay eedeyn lahaayeen qof walba marka laga reebo iyaga. Maqaalkani wuxuu u muuqdaa inuu tusaale fiican u yahay tan.
Jawaabta saddexaadna waxay ka timi Miguel de Icaza:
Linus, kaqeyb qaadashadaydii Gnome waxay dhamaatay 5 sano kahor, waxaana kaliya kusii nagaaday dariiqa maxaa yeelay waxaan u isticmaali jiray Gnome isticmaale ahaan waxaan dhisaynay barnaamijyada C # ee isticmaala maktabadaha Gnome. Markaa waa cadaalad daro dadka Gnome anoo ku daraya booskeyga mashruucooda. Mudo dheer lama aanan hadlin, wax fikrad ahna kama qabo hadii midkoodna ila ogolaado.
In kasta oo aad siyaasad adag u leedahay is-dhexgalka labada-geesoodka 'kernel', oo ah wax lagu amaano, waxaanan ku ammaanayaa booskaaga meesha aad kiiskaas ku qortay liiska dirista, ra'yigeygu wuxuu yahay in aragtida soo-saareyaasha kernel-ka ay saameyn ku yeelatay sida bulshada FOSS u dhisayso software.
Waxaa jiray wadahadalo dhan iyo doodo xasaasi ah oo ku saabsan su'aasha darawallada binary iyo sababta aad ugu tixgeliso inay tahay ciyaar cadaalad ah in lagu jabiyo isdhaafsigaas. Dhibaatadu maahan inaad saxan tahay iyo inkale, laakiin niyadda jirta waxay ahayd "qashinka ma hayno."
Waxaad leedahay shakhsiyad adag, isla dad badan oo kugu hareeraysan iyo shakhsiyaddaada adagna, ha jeclaato ama ha jeclaato, waxay saameyn ku yeesheen dabeecadaha dadka.
Tusaalaha tani wuxuu ahaa kaftanka ku jira liistada kernel (oo aan xusuusto inuu ahaa 1999-2000). Qaybtaydu waxay tahay inaad tahay qof dhalaalaya, caqli badan oo qosol badan, sidoo kale waxaad noqon kartaa mid xun oo daran. Qaar badan ayaa isku dayay inay kugu daydaan, laakiin ma aysan aheyn kuwo dhalaalaya, caqli iyo qosol badan. Waxayna noqdeen kuwa xun oo qallafsan dabeecaddaasina waxay ku faaftay liisaska dirista.
Marka fariinta inta badan la maqlay waxay ahayd inaan sameynay wax sax ah, xitaa hadii aan jabino softiweer. Wayna sameeyeen.
Laga soo bilaabo API-yada, daabacaadda nidaamyada kala duwan, nidaamyada maqalka, bilowga daemons, nidaamyada basaska, dhammaan isbeddeladaas yar ee isdaba-joogga ah waxay dhibaatooyin u geysteen iibiyeyaasha barnaamijka saddexaad ee madaxbannaan ee doonaya inay taageeraan desktop-ka Linux.
Taageerida desktop-ka Linux-ka ee loogu talagalay soo-saareyaasha softiweerka ee macaamiisha ah waa mid aad qaali u ah suuquna waa mid yar oo si qoto dheer u kala jaban
Wixii ku saabsan Gnome, shaqsiyan, waxaan jeclaan lahaa inaan arko xoogaa isbadal ah oo la sameeyay, waana ku raacsanahay qaar ka mid ah cabashooyinkaaga ku saabsan Gnome Shell. Laakiin iyagu iima dhibsan sidaad adigu oo kale.
Waxaad ku wareegeysaa baadiyaha, waxaana rabaa inaan kuu xaqiijiyo in cidina aysan ku qasbeynin qof inuu wax liqo.
Wixii ku saabsan CORBA, labadaba reer KDE iyo annaguba, annaga oo ka soo jeedna caqligeenna, ayaan u soo dhoweynnay si aan u xallino mashaakil taxane ah oo aan u malaynay inaan heli doonno, iyo in aakhirkii aynaan haysan. Xor ayaad u tahay inaad i weerartid aniga oo difaacaya xulashadayda liidata waqtigaas. Kuwii ugu caqliga badnaa ayaa adkaaday oo CORBA ayaa daaqadda ka baxday. Maxaan dhihi karaa, waan yaraa, iyo kuwa KDE sidoo kale. Labada xaaladoodba, cayayaanka waa la hagaajiyay, mana jiro CORBA aad ku dhibtooto.
Uma baahnid inaad ka walwasho .NET sidoo kale. Mono qayb kama aha Gnome, mana jiro barnaamij loo yaqaan 'Gnome' oo adeegsada, markaa waad nabad qabtaa.
Alan (Cox, oo ka jawaabaya jawaabta koowaad), sidoo kale waan ku jeclahay adiga.
Waxaan layaabay inaadan xasuusnayn inaad kaqeyb qaadatay bilowga Gnome, inaad naguboorisay inaan horumarino Gnome LinuxNet, inaad dhibaato kuqabtay shatiga Qt sidayada oo kale, inaad wax kudarsatay Gnome, iyo inaad xitaa kaqeyb gashay shirkii ugu horeeyay ee Gnome ee kahor-IPO Red Hat.
Aniguna waan ka daalay tarjumaadda: Waxaan ka tagi doonaa boostada si aan u arko faallooyinka asalka ah iyo kuwa kaloo badan
Track Bonus: daqiiqad madadaalo kuu ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Desktop Linux wuu dhintay, qeybta 2.
Inbadan oo isku mid ah, xan iyo xan badan, xan iyo "gariirid." Sababtoo ah qofku wuxuu faallo ka bixiyaa ama u muujiyaa qaabkiisa uu u arko waxyaalaha ay tahay inaanan ka walwalin. Miguel, sida uu si cad u sheegay, qoraalkaani wax dambe kuma lahan GNOME ama Linux, ha u sii wado mashaariicdiisa oo ha dhaho wuxuu leeyahay, wadar ahaan, taasi ma dili doonto GNOME ama Linux.
Maanta waxaan aqriyay maqaal ka soo baxay baloog aad u xiiso badan. Isaga oo ka hadlaya soo saarista rakibaye codsi oo ka shaqeyn kara dhammaan waxyaabaha kala duwan, ayuu qoraagu sheegay in tani fure u tahay mustaqbalka barnaamijka Linux iyo taageerada dalabka ganacsiga.
Waxay sidoo kale ka hadlaysaa sida Linux-ku isu beddeleen tan iyo markii ay bilaabeen inay horumariyaan arjiga.
Waxaan ka helay arrin aad u xiiso badan, iyo dariiqa la xiriira dhimashada desktop-ka ee Linux, maadaama arrimuhu isu beddeleen kuwo ka sii wanaagsan, oo haddii rajo jirto, halkan waa isku xirka (waa Ingiriis)
hehehe, qosolka fiidiyowgaO!
Marka laga hadlayo jawaabaha, waxaan arki karnaa in dooddu sii socoto, marka la eego faallooyinka, runtu waxay tahay ma garanayo halka ay arrintani ku dambayn doonto, ka waran haddii aan ogahay in Gnome uu ku sii socon karo jidka Icaza la'aantiisa, maadaama uu sida Isticmaalaha ayaa leh dhadhankiisa sida midkeen kasta oo kale oo haddii uu jeclaa C # .NET oo uu u haajiro MAC, isaga ayey u roon tahay, qof kastaa wuxuu xor u yahay inuu doorto aaladaha hadba baahidayada!
Marka laga tago dhammaan puterio (xanta) waxaan u maleynayaa inay fiicantahay inay ka wada hadlaan oo dharkaas qorraxda kala baxaan. Linus bitch at nvidia hadana waxay siinayaan taageero fiican. Ayaa garanaya, laga yaabee inay tani ka caawiso waxyaabaha inay hagaagaan. Waxaa laga yaabaa in dadka gnome-ka ay ku dhacaan (inkasta oo aan fahamsanahay in dhibaatadu ay tahay dadka redhat-ka ah ee lacagta geliya oo aysan rabin in dadka ubuntu ay wax ku yeeshaan go'aannada)
Waan aqriyay maqaalka oo dhan iyo runta markii ay doodan bilaabantay kuma raacsani Miguel de Icaza, laakiin sadarkaan ayaa dareenkeyga qabtay:
Tusaalaha tani wuxuu ahaa kaftanka ku jira liistada kernel (oo aan xasuusto inuu ahaa 1999-2000). Qaybtaydu waxay tahay inaad dhalaalayso, caqli badan tahay oo qosol badan, sidoo kale waxaad noqon kartaa mid xun oo daran. Qaar badan ayaa isku dayay inay kugu daydaan, laakiin ma aysan aheyn kuwo dhalaalaya, caqli iyo qosol badan. Waxay ku heleen xumaan iyo qallafsan dabeecaddaasina waxay ku faaftay liisaska dirista.
Waxaanan u maleynayaa in isbarbardhigan loo wareejiyay dad badan oo isticmaala GNU / Linux kuwaas oo kaqeyb gala doodaha qaarkood ama irc phrase kaliya weedhan ayaa ila muuqatay inay aniga ila saxantahay
Midkan kale sidoo kale aniga xiisa ayuu ii ahaa, halkan waxa lagu gartaa qaladaadka, kulligeen waan khaldamaynaa, laakiin intee annaga naga mid ah ayaa qira?
Xor ayaad u tahay inaad i weerartid aniga oo difaacaya xulashooyinkeygii xumaa ee waqtigaas. Kuwii ugu caqliga badnaa ayaa adkaaday oo CORBA ayaa daaqadda ka baxday. Maxaan dhihi karaa, waan yaraa, iyo kuwa KDE sidoo kale. Labada xaaladoodba, cayayaanka waa la hagaajiyay, mana jiro CORBA aad ku dhibtooto.
Laga soo bilaabo taariikhda koowaad, waxaan kaliya ogahay in Miguel de Icaza uu saameyn weyn ku leeyahay waxa isaga xiiseynaya. Ugu dambeyn khaladka waxaa yeelan doona Linus Tolvards.
Tan labaad, waad qiraysaa qaladaadkii hore laakiin ma ogid inaad ku sii fooraneyso isla dhagaxaanta isla marba marka ka dambeysa. Bartamaha koonka waa la rumeysan yahay.
However. »Si kastaba ha noqotee, maahan cudur laga helo Ilaha Furan laakiin waa mashruucyo gaar ah sida cudurka Gnome - kernelkeyga 3.6rc weli wuxuu wadaa Rogue binary oo la soo saaray 1992. X wuxuu la jaan qaadayaa codsiyada ka weyn Linux.
Markaas ayuu oranayaa, "Gnome sikastaba maahan desktop - waa mashruuc cilmi baaris ah."
Kama joojin qosolka kadib markaan aqriyay parafoskan hehehe
Kaliya Wao ...
Qiimaha ma hayn karo oo waxaan toos ugu aaday Google+ oo puffffffffffffffff waxaa jira sida 100 faallooyin xD ahahaha
Waan jeclahay alan cox dijo
Alan Cox isagu wuxuu leeyahay:
Gnome dhab ahaantii maahan desktop - waa mashruuc cilmi baaris ah.
Jawaab ku saabsan Waan jeclahay Alan Cox
Maxay ereyadu muhiim u yihiin?
waa uun ereyo
Waxaan kaliya rajaynayaa inay wax hagaagaan, dhagaystaan ​​fikradaha isticmaaleyaasha qof walbana uu u jiido dhinacaas.
Maaddaama ay ku shaqeynayaan nidaam dhan oo midaysan, waa hagaag taasi waa wixii aan ku fahmay maqaalka gespada (http://gespadas.com/archlinux-systemd)
Linus had iyo jeer hadaladiisu waa kuwo aad u xoogan 😀 Stallman hadalada waa kuwo xoogan oo qaar badan ayay u qaataan inay tahay wax lagu soo rogo laakiin isagu marwalba wuu saxan yahay (in kasta oo aysan halkan waxba ka muuqan) Alan cox's waa mid xiiso leh 😀 hada Miguel ma fahmin iyaga waqtigan. Ma aanan aqoon ereyga casaanka ah ring
Waxaan ku jiray duntaas.
Runtii kuma arkin halkaas.
Waxaan rakibi doonaa GNOME si aan u arko sida ay u xun tahay ama u wanaagsan tahay. Waxaan isticmaali jiray Lxde sanado. Laakiin dad badan oo isticmaala Linux kumbuyuutarka ayaa wali ku nool noocyo kala duwan oo awood u leh inuu doorto midka ku habboon baahiyaheena. Xaaladdan oo kale, haddii kumbuyuutarku ku dhinto Linux, weli waan daawan karnaa bogagga internetka, dhagaysan karnaa muusikada, barnaamijka iyo maaraynta qalabka dhammaantood.
Ku jawaab juliordeb
Waxaan bogaadinayaa Alan Cox jumladiisii ​​ugu dambaysay, anigoo ku sifeeyay: "Gnome waa mashruuc cilmi baaris ah." Weligay sidan oo kale uma arag, laakiin hadda, waxay tirtireysaa shaki badan oo aan ka qabay Gnome 3… hehe. ka dib oo dhan, uma arko iyaga oo sidaa u sii lumay.
gnome kaliya maahan kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka, waxa ay dhahaan waa dhintey waxay ila tahay doqon aniga maxaa yeelay waxaa jira deegaanno badan oo ku jira Linux furanka, fluxbox, e17, kde, lxde iyo dheer iwm ... waxa wanaagsan ee qofku la qabsan karo sida qofku rabo taasi waa waxa gnome 3 ka maqan midnimada waa runtaa iskudhafka dambe wuxuu kufiicanyahay netbook laakiin desktop wuu xoogaa cayr yahay.
Wax badan oo Gnome3 shit ah ayaan isticmaalayaa Xfce + Compiz, oo haddii arrimuhu sidan ku sii socdaan waxaan ku dambayn doonaa jahwareerka GNU / Linux waxaanan aadi doonaa dhinaca mugdiga hahahahaha waxaan ku leeyahay OpenBSD, taasi dhab ahaan waxaan u malaynayaa inay tahay nidaam ka wanaagsan marka loo eego GNU / Linux laakiin kan kaliya Khasaaraha uu ila haysto waa liisanka "BSD". Ma jecli shatiga noocaas ah.
Waxaan isku dayaa inaan aamin u ahaado GPL 🙂
Ku jawaab saito
Dhammaan bayaannadaas, waxaan kaliya ku arkaa xusuusta iyo wada noolaanshaha Icaza. Linus iyo Cox waxaad moodaa inay ahaayeen kuwii ka dhaqaaqay Linux ee ma ahan Icaza (yaa ahaa qofkii si uun u sameeyay).
Runtuna waxay tahay yaa og hadii ay sameeyeen waxyar kahor sidoo kale kaliya inay sii wadaan muuqaalka (maxaa yeelay Linux waxay heli doontaa sumcad aad u weyn haddii xitaa waalidkood aysan rabin), ugu yaraan Linus wuxuu waday Mac muddo dheer, oo ah Dabcan isagu wuxuu yidhaa waxaan ku rakibay meel wax lagu iibiyo oo dadku way rumaystaan, laakiin yaa garanaya waxa dhab ahaan mashiinkiisa ku jira.
Waxaan u maleynayaa in jawaabtaydu ay u dhawaaqi doonto si aan caadi ahayn, laakiin wax waliba waxay leeyihiin sabab.
Jawaabtii Alan Cox ma noqon karin mid niyad jab, xumaan iyo edeb darro badan; in inkasta oo si heer sare ah loo sacbiyay maxaa yeelay wuxuu yiri cayda qaar badan "ay doonayeen inay maqlaan" iyo in waxa badan ay rabeen in laga aargoosto (Linux) ay yimaadaan, hadana ma badaleyso wax aan murugo iyo been abuur aheyn "iyo inbadan" si toos ah cay iyo edeb daro Waa u bilaash in la weeraro wax aan khuseyn iyo sababta oo ah si la mid ah ayaa dambi la mid ah laga sameyn karaa Linux (kernel) waxayna noqon doontaa sida "ansax ah"; Aan aragno waxa dhici lahaa haddii qof yiraahdo tusaale ahaan "Linux maahan Operating System, waa isku day beta kernel joogto ah oo ay sameeyeen mutadawiciin mutadawiciin ah iyo koox aan awoodin inay wax iskood wax u qabsadaan", "Linux waa balanqaad weligiis ah oo ku saabsan guuldaradii weligeed jirtay ee 20 sano aysan fulin mana aysan sameynin hal talaabo u soo dhawaada qabsashadii la rabay ee desktop-ka, in hadda aysan heysan wax kale oo aan ka ahayn inay iska dhigaan oo dhahaan runti 'weligood ma aysan soo jeedinin' maadaama aynaan xasuus lahayn "," Linux waa nidaam aan dhammeystirnayn oo aan cidna awoodin beddel ka noqo marka laga reebo geeks-yada iyo barnaamijyaqaannada dhibku ku jiro ama u sameeyo wax aan micno lahayn sida daalacashada iyo wax kale oo yar, maadaama ay ka maqan tahay codsiyo dhab ah marka laga reebo isku dayga beddelka aan u imaanaynin in la barbardhigo xulashooyinka xirfad-yaqaannada ah iyo kuwa waxtar leh »,« Linux waxay kaliya ku guuleysanaysaa serverka maxaa yeelay waa waxa ugu raqiisan uguna fudud ee la heli karo waxaa jira socodsiinta Apache », qaar ayaa ka badan kuwa kale, qaar ayaa ka hubsan kuwa kale, qaar ka qaalisan kuwa kale, laakiin xaqiiqdii in ka badan hal ayaa xanaaqsan waxayna u muuqdaan kuwo aan cadaalad aheyn ugu yaraan kuwa kalena xitaa waxay ka dhigayaan inay afka ka xumeeyaan, maadaama adduunka Linux wax walba sheegi karaan ka soo horjeedda cid kastoo ay tahay (xitaa haddii ay ku saabsan tahay mashruuc kale oo u dhigma ama ka sii furan oo ka xor ah kernel) oo ay noqon karto ciqaab la'aan, xitaa way kugu sacabi karaan, laakiin wax ka soo horjeedda Linux (kernel) waa "lama cafin karo"; Tan labaadna waxaan ku helayaa sababta jawaabta Alan Cox u ahayd mid edeb darro ah oo la canaanto, maxaa yeelay haddii dabadiisa ay xanuunto maxaa yeelay waxay yiraahdeen Linux ayaa ku fashilantay Desktop-ka, ma ahayn inuu yimaado oo caayo "Mashruuca Saaxiibka", Mashruuc sameeya isaga waxaan u shaqeeyaa Linux oo waxay buuxisaa mid ka mid ah meelaha banaan ee Linux u leeyahay maadaama ay kaligeed waxtar u lahayn ficil ahaan waxba, haddii aysan ahaan lahayn waxyaabo ay ka mid yihiin GNOME iyo kuwa kale oo badan oo "ka shaqeeya" si loo abuuro nidaam deegaan oo hagaagsan oo ku wareegsan geedka weydiiso wax kasta oo soo noqda Linux ma noqon doonto in ka badan boqol meelood meel waxa hadda yar ee ay tahay; taasi haddii ay "wax badan ogaadaan" sida inay u diidaan kuwa kale oo aan u mahadnaqin kuwa iyaga ka caawiya inay muujiyaan iyagoo wax u qabanaya naftooda halkii ay ka sameyn lahaayeen kernel (iyo in ay ku sameeyaan caawinta meeraha badhkiis), taas oo horeyba u ahayd maalintii ay sameeyaan Nidaamka Hawlgalka dhammeystiran oo sidaas ayan mar dambe awood u yeelan doonin inay eedeeyaan kuwa kale oo sidan oo kale waxay awoodi doonaan inay isbarbar dhigaan isla sinnaan ka dhan ah MS iyo Apple oo ay ku sameeyeen nidaamkooda oo dhameystiran iyo kaligood. Kuma doodi karaan inayan haysan ilo maxaa yeelay waa inay noqdaan kuwa is-hoosaysiiya, oo aan ahayn, iyo marmar sababta oo ah waxay haystaan ​​caawimaad kumanaan mutadawiciin ah oo aan loo baahnayn inay bixiyaan ama mushahar siiyaan iyo sababta oo ah inay tahay inay ku jiraan Aniga oo ah «qaabka mucjisada leh ee Bazaar» in kastoo aan ogahay inay been tahay inay iibiyaan dhamaadka sheekada.
Waxa aan hadda ahay markaan qof dhaho wax ka dhan ah Linux waxaan u maleynayaa inay si fiican ugu qalmeen, maxaa yeelay dadkaas xayawaanku waa kuwa ugu xun uguna xun ee aysan lahayn wax xasaasi ah markay tahay inay si aan xaq ahayn u weeraraan "dhinacooda" Maxay tahay sababta ay in la difaaco haddii ay u daayaan inta kale inay dhintaan, ka xumahay, way dhintaan! inta kale? maxaa yeelay aflagaadooyinkaas kuwa linux-ka ah malahan maya ka duwan kuwa ay dadkan ka soo horjeedaan "dhinacooda".
Jawaabtii Torvalds sida been abuurka ah ee caadiga ahayd, waa adhominem buuxda oo wax walba oo qalad ah oo uu ku dhacay GUUL.
Laakiin marka la soo koobo, si uun ama si kale, labadoodaba indhahoodu way qarsadaan, labaduba waxay dhahaan "adiga ayaa khaladkaaga ahaa anaguna waan fiicanahay" iyo in la dhaho "laakiin hadii Linux ay layaab ku noolaato, ha ii sheegin waxa ka soo horjeeda ee aan ' waan ku fiicanahay xaqiiqdeyda, lalalalala waxba kama maqlo ".
Arrinta kale ayaa ah inay run tahay, in kastoo hadda ay waalanayaan, waa in laga soo bilaabo OpenSource qaabkii loo iibiyey in ay ahayd in wax lagu qabto "oo loo maro koodhka", "waxtarka iyo heerka sare" ee koodhka. Hadda, dhismayaashaas, miyaanay ahayn wax dabiici ah in haddii aad wax iska beddelayso sababta oo ah hadda way ka sii fiicnaan doontaa, ka waxtar badan tahay oo aad u fiican, waa in la sameeyaa? Waa waajib in sidaa la yeelo !! tanina waa uun mid ka mid ah raadadka badan ee dhismahani leeyahay (midka ay tiri Icaza mid kale ayuu noqon karaa); dabcan, 20 sano ka dib marka ay tahay inaad muraayadaha ka qaadatid Torvalds shirkaduna waxay noqon karaan kuwo waalan oo la yaqaan oo la dhaho "weligeen taas ma dhihin", "marwalba waan ogayn sida wax loo sameeyo", dabcan dagaalka kadib qof walba waa guud iyo qof kasta oo ay yaqaanaan waxa saxda ahaa, Icaza ugu yaraan waxay dhahdaa "waan khaldanayn", kuwa kale waa kuwo caqli xun oo ay dhahaan "laakiin markasta waan ogayn oo u sheegnay." Laakiin haye, qof kasta oo xusuus leh inuu adeegsado, maya maya ma dhihi karo maxaa yeelay waxay ku daaleen wacdinta fikradahaas oo ku filan waana taas sababta oo ah fikradahaasi waa tiirarka ilaha furan oo la'aantoodna waxaa looga tagi lahaa guryahooda oo waxba ma lahan . Laakiin waxaan horeyba u aragnay in adduunkan haddii aysan jirin wax ay qaali yihiin.
Icaza way ku fashilantay inay xuso sababaha fashilka la'aanta biseylka iyo geesinimada is-dhaliil la'aanta, is-khiyaanada badan iyo, dabcan, aragtida xun ee dadka kale.
Miguel de Icaza: waxaad ku dhex leedahay gudaha !!!
Carlo Vincent dijo
Sikastaba, Linux waa guuldareysi, inkasta oo laga yaabo inaysan sabab u aheyn Linux lafteeda, ama qofkasta oo laxiriira dunida Linux. Waxaan haystay igu filan, kadib 4 sano oo aan isticmaalayay. Dhameystirka taabashada waxaa i siiyay "tirtirka" tirtirka dhowr faylal jaamacadeed oo ku yaal Ubuntu. Waxaa laga yaabaa in Icaza uu sax yahay oo Linux aysan ahayn wax ka weyn daruur qiiq ah.
Ku jawaab Carlo Vincente
LIGHTTPD - waa adeege web aad u dhaqso badan oo miisaankiisu culus yahay
Nooca cusub ee SolusOS 1.2 "SHARCI"